SBO: Ebla 27 bara 2018. Oduu, Seenaa Gabaabaa J. Gammachiis Guutuu, Ijoo Dubbii ABO, – Kichuu
HomeAfaan OromooRadioSBO: Ebla 27 bara 2018. Oduu, Seenaa Gabaabaa J. Gammachiis Guutuu, Ijoo Dubbii ABO,
Akumaa beekammuti Ebla 27 /2018 gooticha Urgeesaa Daammanaa manna murtii lidatatti argamuu kesaatti waga 4 itimurteesani jiruu. qeerrootaa biraa wajiin, kuni waan hintaanee dha. Kanafu jarroni kuni hikkamuu qabuu.
Gotticha Beekama Qeerroo Urgeesaa Daammanaa ijooluma dhan manna hidhaa wayanee kesaatti an an’gudatee dha. Qeerroon kun baraa 2014 dhugugaa saynii Amboo irraati godhamee wayanee federalaa polissii dhan qabamee manna hidhattii makilawitti darbamee an’dararamma turee dha. Kanafu qeerroo Amboo mucaa kana falmuu qabaa .
Dubiin kuni ciimaa dha Qeerroon Amboo hundii caale jedhee laaluu hin’qabuu tokko’lee. Qerroon amma gadhifamuu qaba dhiiroo iriiyootaa Isaa wajiin kanafu mormin cimman akka wamamuu dhamsaa kana wali dabarsaa dafatii.
#Free Urgeesaa Daammanaa
#Qeerroo Bilisumma Amboo